Dhaqanku waa in uu dawladnimada qurxiyo, laakiin maaha in uu qiima-dilo (WQ: Mustafe Barkhad CabdilaahI “Dhimbiil”) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Dhaqanku waa in uu dawladnimada qurxiyo, laakiin maaha in uu qiima-dilo (WQ: Mustafe Barkhad CabdilaahI “Dhimbiil”)
Somaliland dhisiddeedii hore waxaa door muhiim ah ka qaatay oday dhaqmeedkii xilligaa jiray oo maanta dad faro ku tiris ahi ka joogaan. Waxaan aaminsanahay haddii aanay Somaliland berigaas helin odayadii matalayey beelaha Somaliland ma curateen, sababtoo xilligaas in dawlad iyo nidaam maamul la sameeyo waxaa ka horeeyey in beeluhu heshiiyaan.
Intaas ka dib, waxaa loo baahnaa cid aqoon u leh dawladnimada iyada oo aan marna laga maarmi karin oday dhaqmeedka, sababtoo ah waxay xasaanad ka haystaan beelaha ay matalaan oo ah daneeyeyaasha dawladnimada. Haddaba maalmahanba waxaa jirta musharaxiin isku diyaarinaya qabashada xilal dawladnimada laf dhabar u ah. Shaqsiyaadkaas xilalka u tartamaya waxaa horyaala siyaasad dhaqanka dhabarka ku haysa oo ah in reerku soo xulaan, kadibna xisbigu aqbalo.
Arrintani waxay darbi adag ku tahay dhalinyar badan oo aqoonyahan ah marka ay dhacdo in reerkii uu ka soo jeeday isku raacaan xildhibaan kale oo aanay aqoon iyo waayo aragnimo ku xulin laakiin ay waxyaabo kale u eegeen.
Haddaba dhaqanku waa in uu dawladnimada qurxiyo, laakiin maaha inuu qudhmiyo. Reer kasta lagama waayo qof leh aqoon, waayo aragnimo iyo awood hogaamineed, oo ay soo xulaan. Balse waxaa jirta dhaqankii uu dawladnimadii ku dhex milmay taasina waxay keeni kartaa in laga marin habaabo doorashada masuul xil kas ah oo curin kara xeerar dawladnimada wanaajiya laakiin aan wiiqin.
Haddaba waxaa jirta fariin an rabo in aan u reebo dhalinyarada oo ah dadka ugu badan ee codeeya, taas oo ah in ay cod iyo cudud ba ku taageeraan aqoonyahan habka, hiigsiga iyo haybadda hogaamineed leh ee dhaqanka ka heelinayo, laga ag sharaxayo dad leh qaar ka mida astaamahan soo socda kuwaas oo ah:-
1. Waayo aragnimo la’aan
2. Mid aan lahayn aqoon gaadhsiisan halka looga baahan yahay.
3. Masuul hore xil u soo qabtay oo musuq lagu eedeeyey.
4. Masuul qorbe jooga ah oo an fahmi karin duruufta dadka uu matalo nooca ay tahay IWM.
Xisbiyada qudhoodo waa inay arrintan door ku yeeshaan oo odayada dhaqanka ee u keenaya musharaxiinta iska baandheeyaan oo ay kaalintooda qaataan.
Inigu intaas baan awoodaa
Waana fikirkayga ciddii igaga duwan waan soo dhawaynayaa.
W/Q: Mustafe Barkhad Cabdilaahi ( Dhimbiil)
Shaqeeya arrimaha bulshada
Master of Good Governance and Leadership( Hoggaaminta iyo Maamul wanaagga)